Trump oo soo dhaweynaya qaar ka mid ah soogalootiga - BBC News Somali
Madaxweynaha Maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey qorsheyaal ku aaddan nidaamka socdaalka ee Maraykanka kaas oo tixgalin gaar ah siinaya dhallinyarada, dadka sida wanaagsan wax u bartay, iyo shaqaalaha afka Ingiriisiga yaqaan.
Hadal uu ka jeediyey Aqalka Cad, ayuu ku sheegay in la joojin doono nidaamka haatan jira ee tixgalinta gaarka lagu siiyo dadka calaaqaadka dhanka qoyska ku yimaada Maraykanka.
Waxa uu sheegay in la xoojin doono ammaanka xuduudda tallaabo adagna laga qaadi doono dadka magangalyo doonka ah.
Saraakiil sar sare oo katirsan xisbiga dimuquraadiga ayaa fikradihiisa ku tilmaamay kuwo "aan wax kasoo qaad lahayn".
Waxa ay sheegeen in nidaamkaan cusub aanu lahayn qaab ay dhalasho ku heli karaan dadka muddada dheer joogay dalkaas - boqolaal kun oo qof ayaa yaraantoodii la keenay Maraykanka kuwaas oo aan wali helin wax xuquuq ah.
Muxuu sheegay madaxweyne Trump?
Mar uu ku sugnaa beer ku dhextaal Aqalka Cad, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in qorsheyaashiisa dhanka socdaalka ee Maraykanka "ay xaasidnimo ku abuuri doonaan dunidan casriga ah"
"Waxaan ku faanaynaa albaabka cusub ee aan dalkeenna u furnay ee aan dib ugu dhisaynno. Balse muhaajiriintaas intooda badan waa in ay soo maraan tartan dhanka xirfadda ah,". Ayuu yidhi
"Isbaddalka ugu wayn ee aan samaynayno waa in aan kordhinno saamiga muhaajiriinta xirfadleyaasha ah 12% ilaa 57% waxaan sidoo kale jecelnahay in aan intaas kasii badinno."
Waxa uu sheegay in muhaajiriintu ay u baahan yihiin "in ay bartaan afka Ingiriisiga si ay uga gudbaan imtixaanka aqbalaadda".
Asagoo dhaliilayey nidaamka magangalyada ee haatan jira, ayuu yidhi: " Dalkeennu wuxuu taariikh ahaan caan ku yahay in aal ilaalinno kuwa kasoo cararaya gaboodfallada dawladaha kale ay ku falaan".
"Nasiib darro, dadkii magangalyo doonka ahaa ee runta ahaa waxaa meesha ka saaraya kuwo ku marmarsiyoonaya doonitaan liita".
Xisbiga Dimuquraadiga ah muxuu arrintaas ka yidhi?
Qorsheyaashaas ayaa loo baahan yahay in Congress-ku ay ansixiyaan ayadoo aqalka hoose uu haatan maamulo xisbiga Dimuquraadiga ah.
"Waa qorshe aan wax kasoo qaad lahayn mana ahan soo jeedin dhab ah," ayay tidhi Nancy Pelosi, oo ah afhayeenka xisbiga Dimuquraadiga ah ee aqalka wakiillada.
"Ma waxay leeyihiin qof kasta oo inta taariikhda la ogyahay cag soo dhigay dalkeenna ma aanu lahayn xirfad, waayo mahaystaan shahaadada Injineernimada".
Pramila Jayapal oo ah haweeney katirsan xisbiga Dimuquraadiga ayaa sheegtay in qorshehaasi uu meel uga dhacayo nidmaanka qoyska ku salaysan ee Maraykanka oo ay ku tilmaamtay "siyaasad xuddun u ah arrimaha socdaalka dalkeeda".
Image caption Ilhaan Omar
Ilhan Omar oo kamid ah Congress-ka Maraykanka ayaa kamid ah dadka dhaliilay qorshaha cusub ee nidaamka socdaalka.
Waxayna tidhi "Dhabarkeenna uma jeedin karno dadka magangalyo doonka ah. Waa wax laga xumaado in aan maqalno qaabka uu u hadlay Madaxweyne Trump ee ku aaddan xuquuqda aadanaha, kuwaas oo kasoo cararaya xaaladaha liita, aniguba kuwaas ayaan kamid ahaa," ayay tidhi Ilhan Omar.
Sidee arrintaas looga falceliyey?
Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in qorshehaani uusan u wanaagsanayn dadka beeraleeyda ah iyo shaqaalaha kale ee sida ku meel gaarka ah u shaqeeya.
Ali Noorani, oo ah agaasimaha fulinta ee koox soogalootiga u qareenta, ayaa sheegay in qorshahaasi uu u muuqdo "mid lagu shaqaalaysiinayo xirfadleyaasha injineerada ah, balse uusan ahayn mid gacan siinaya beeraleeyda xirfadda leh"
"Dhab ahaantii, dhaqaalaheennu labada waa uu u baahan yahay," ayuu yidhi.
Madaxweyne Trump ayaa waligiisba meel adag ka taagnaa arrimaha soogalootiga, markii uu ku jiray ololaha doorashada ayuuna ballan qaaday in uu darbi ka dhisi doono xadka Mexico.
Horraantii sanadkaan ayuu xuduudda Koonfureed ee Maraykanka kaga dhawaaqay xaalad dag dag ah oo qaran, asagoo sheegay in uu u baahan yahay awoodo gaar ah si loo dhiso gidaarka si loo hakiyo soogalootiga sharci darrada ah.
Bilihii ugu dambeeyey kumanaan muhaajiriin ah ayaa Maraykanka uga soo qulqulayey dhanka dalka Mexico si ay magangalyo uga helaan dalka Maraykanka.
Mr Trump ayaa arrintaas kaga jawaabay ciidamo dheeraad ah oo uu halkaas ku daad gureeyey asagoo ku hanjabay in uu soo xirayo xadka.